Better World Ed: စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယိုများနှင့် ပုံပြင်များသည် သင်ယူမှုကို လူသားဆန်စေသည်။
အဘယ်ကြောင့် Wordless ဗီဒီယိုများ
စာနယ်ဇင်း & မီဒီယာ အင်္ဂါရပ်များ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းများကို ကြည့်ရှုပါ။
လက်ဆောင်တစ် ဦး အသင်းဝင်
ကျန်းမာရေး၊ သုခနှင့် အာဟာရ
အတိုင်းအတာ & ဒေတာ
တိုင်းတာခြင်း & ဂျီသြမေတြီ
1s နှင့် 10s ထည့်ခြင်း
ဂဏန်း ၂ လုံးပါနံပါတ်များနှင့်အတူမိတ်ဆက်ခြင်း
အမြင်ယူခြင်း & ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိအမြင်
လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်္ချာ၊ တတ်မြောက်မှု၊ စာနာမှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်၊ သိချင်စိတ်ပြင်းပြမှု၊ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သင်ကြားပေးပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာ့ဇာတ်လမ်းပေါင်း 150+ မှတဆင့်။
သင်ယူခြင်းသို့ စစ်မှန်သောဘဝကို ယူဆောင်လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားဆန်သော သင်ယူမှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် လက်တွေ့ဘဝဇာတ်လမ်းများကို ဖန်တီးပါသည်။
စူးစမ်းချင်စိတ်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးတတ်အောင် သင်ပေးပါ။ ပြောမပြတတ်အောင် အံ့သြနေမိသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသပ္ပါယ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပါဝင်သည်။
သင်္ချာနှင့် တတ်မြောက်မှုကို သက်ဆိုင်စေပါသည်။ လူသားဆန်သော ဇာတ်လမ်းများသည် စာနာမှုနှင့် ပညာရှင်များကို ပေါင်းစပ်ပေးသည်။
ဆက်စပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
Better World Ed လူငယ်များကို ကူညီပေးသည်။
သင်္ချာနှင့် တတ်မြောက်မှုကို အသုံးချပါ။
စာနာမှုနှင့် ကရုဏာကို မွေးမြူပါ။
တံတားကို ပိုင်းခြား၍ ပိုင်နိုင်စေရန်၊
ပညာရေးကို လူသားဆန်အောင် လုပ်ပါ။
ကျောင်းမှာ၊ အိမ်ကျောင်းတက်၊ ဘဝ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစကားလုံးမဲ့ဗီဒီယိုများစွာနှင့်တွဲဖက်ထားသော ရေးထားသောပုံပြင် 20 နှင့် သင်ခန်းစာအစီအစဉ် 20 ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
Bookmark ပုံပြင်များ & သင့်ကိုယ်ပိုင် playlists ဖန်တီး!
$42.00 အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး လျှင် / တစ်နှစ်လျှင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသော Global Wordless ဗီဒီယိုများစွာနှင့်တွဲဖက်ထားသောဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော Written Stories ၅၀ နှင့်သင်ခန်းစာအစီအစဉ် ၅၀ ကိုရယူပါ။
$72.00 အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး လျှင် / တစ်နှစ်လျှင်
စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယို 50+၊ ရေးထားသော ပုံပြင်ပေါင်း 150+ နှင့် 150+ သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကို နိုင်ငံပေါင်း 14 နိုင်ငံမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
အကောင်းဆုံးရှာဖွေမှု & browse အတွေ့အကြုံကို!
ဇာတ်လမ်းများကို မှတ်သားပြီး စိတ်ကြိုက် အစီအစဉ်များကို ဖန်တီးပါ။
$100.00 အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး လျှင် / တစ်နှစ်လျှင်
စာတတ်မြောက်မှု၊ အချင်းချင်း၊ ငါတို့ကမ္ဘာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှဝေထားသော လူသားများကို မြင်နိုင်ရန် မှန်ဘီလူးအသစ်။
Wonder Beyond Words With Inspire Better World Ed
ကုဒ်ကိုသုံးပါ ပိုကောင်းသည်။ သင့်အတွက် သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော ဘဝအတွက် 40% လျှော့စျေးဖြင့် ငွေရှင်းသည့်အခါ ဆုလက်ဆောင်!
ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဗီဒီယိုများ။ ပြောမပြတတ်အောင် အံ့သြအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသပ္ပါယ။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ လူများအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်များ။ ယဉ်ကျေးမှုအရ အကျုံးဝင်သည်။
"ဤလောက၌မည်သို့အရေးပါသနည်း" ကိုတုံ့ပြန်ပါ။ ပညာရှင်စစ်စစ်။
သင်္ချာ၊ စာတတ်မြောက်မှု၊ စာနာမှုနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိပညာများကို အတူတကွ ပေါင်းစည်းပါ။
စာနာမှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုကို တည်ဆောက်ရာတွင် ပိုင်းခြားမှုကို ပေါင်းကူးရန် ပုံပြင်များ။
လူသား၊ ဆက်စပ်နိုင်သော၊ သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းဖြင့် အရေးကြီးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို စူးစမ်းပါ။
သင်ယူသူများကို ချိတ်ဆက်ကာ လက်တွေ့ဘဝလူ့ပုံပြင်များဖြင့် ပိုင်းခြားစဉ်းစားပါ။
"၏ဂုဏ်အသရေ Better World Ed စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယိုများနှင့် ဇာတ်လမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ထားနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်ကြားရန် နောက်ထပ် "အရာ" မဟုတ်ပါ။ Better World Ed ရှိပြီးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကနေတစ်ဆင့် ကမ္ဘာကြီးကို အကျိုးသက်ရောက်စေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သင်ယူသူအားလုံးရဲ့ စွမ်းရည်ကို တည်ဆောက်ပုံပါပဲ။”
လှန်ကြည့်၊ ရှာဖွေပြီး စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယိုများနှင့် လူ့ဇာတ်လမ်းများကို စစ်ထုတ်ကာ ပိုကောင်းသော ကမ္ဘာအတွက်
ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် စကားလုံးမဲ့ဗီဒီယိုများနှင့် လူသားဇာတ်လမ်းများ။
တစ်ကမ္ဘာလုံး လိုက်လျောညီထွေရှိသော၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ သက်ဆိုင်သော၊ နှင့် ဘာသာစကား ပါဝင်သည်။
စိတ်ကြိုက်ဖွင့်စာရင်းများဖြင့် သင်၏ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာလေ့လာရေးခရီးကို ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
လူသားဆန်သောဇာတ်လမ်း 150+ ကို ရှာဖွေကြည့်ရှုပါ။
ဇာတ်လမ်းနှစ်ပုဒ် အခမဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ပါ။
ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့သင်ခန်းစာ ဒီမိုများ
နောက်ထပ် Podcasts များနှင့် အင်္ဂါရပ်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်သက်တာလုံးသင်ယူသူများ၊ ပညာပေးသူများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာ့ပုံပြင်ပြောသူများဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ကလေးဘဝတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိလိုသည့် လူသားဆန်သောအကြောင်းအရာကို ဖန်တီးပေးသူများဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်? မပါဘဲ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမပြုမီသိချင်စိတ်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ထူးခြား။ တင့်တယ်လှပသောလူသားများအဖြစ်ရှုမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်စိုစွတ်လာသည်။
ဒါက ငါတို့ရဲ့ အတွင်းနဲ့ကြားမှာ ချည်နှောင်မှုတွေ ဖြစ်စေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အား အခြားလူသားများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်အား ကြင်နာသနားကြင်နာမှုမရှိသော နည်းလမ်းဖြင့် ဆက်ဆံရန် လမ်းကြောင်းပေးသော ကြိုးများ။
Better World Edလူ့ဘဝ၏လက်တွေ့ဘဝဇာတ်လမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအဖုအထစ်များကို ရှင်းထုတ်ပြီး အသိုက်အဝန်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ကူညီပေးသည်။
ဘယ်လိုလဲ BETTER WORLD ED အလုပ်များ
ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာ့ဇာတ်လမ်းတိုင်းသည် သင်္ချာ၊ စာတတ်မြောက်မှု၊ စာနာမှု၊ အံ့သြမှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမြင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ နားလည်မှုတို့ကို အတူတကွ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
WORDLESS ဗွီဒီယို လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထူးခြားတဲ့လူသားတွေအကြောင်း။ သွန်သင်။ သင်ယူပါ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမပြုမီသိချင်စိတ် အသက်အရွယ်တိုင်းမှာ။
လူသားပုံပြင်များနှင့် မေးခွန်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏ သူငယ်ချင်းအသစ်များထံမှ wordless ဗီဒီယိုများ. စာနာမှု၊ သင်္ချာ၊ တတ်မြောက်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ပါ။
အဓိပ္ပါယ်ရှိသော နားလည်မှု။ ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာဇာတ်လမ်းများ။
ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ ဗီဒီယိုနှင့်ပုံပြင်များကိုသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်ရက်လုပ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုများ, အနုပညာ, လှုပ်ရှားမှု, ကစား & ပိုပြီး။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိဥာဏ်၊ သိချင်စိတ်ပြင်းပြမှု၊ စာနာမှုနှင့် သနားကြင်နာမှုတို့ကို တိုးပွားလာစေရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာဇာတ်လမ်းများ။
တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု။
ဘဝအတွက်။ အစောပိုင်းကလေးဘဝ၊ K-12 နှင့်လူကြီးများ။
ဘဝအတွက် သင်ယူခြင်းကို နှစ်သက်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာ့ပုံပြင်များ
ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုရှာဖွေရန်။ ယူဆချက်ကိုစိန်ခေါ်ပါ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်လိုက်မှု။ တရားစီရင်ခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ထား။ မေးခွန်းများကျင်းပပါ။
အချင်းချင်းကြည့်ရှုရန် တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုနားလည်ရန်။
လူသားဆန်မှုကို စာသင်ခန်းထဲသို့ ခေါ်ဆောင်ရန်။ ငါတို့အိမ်မှာစာသင်တယ်။
လူသားဆန်မှုကို ပညာရေးသို့ ယူဆောင်လာရန်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် အတွင်းစိတ်နှစ်မြှုပ်မှုအကြောင်း သင်ယူခြင်းကို နှစ်သက်သည်။ self, အခြားသူများနှင့်ငါတို့ကမ္ဘာ။
သို့ ချစ်ဖို့သင်ယူပါ self၊ အခြားသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ။ ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုအတွက်။
Better world edကျွန်ုပ်တို့၏ လူသားချင်းစာနာမှု အတွက် ပညာရေး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသား၊ စိတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်။
အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ubuntu နှင့်အတူနေထိုင်နေ.
ရည်ရွယ်ချက်။ အဓိပ္ပါယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာ။ ပိုင်။
BETTER WORLD ED လူသားဆန်မှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် ဗီဒီယိုများ
ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းနှင့်ကြားရှိ ကြိုးများကို ရှင်းထုတ်နေသော သတိရှိလူသားများဖြစ်လာစေရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံပြင်များ။ လူ့အသိုက်အဝန်း၏ အထည်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်။
လူ့လောကကို ပညာရေးအဖြစ် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာ့ပုံပြင်များ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာ့ပုံပြင်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာအတွက် စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယိုများနှင့် ဇာတ်လမ်းများကို သင်ကြားပြသပေးသော ဆရာများနှင့် ကျောင်းသားများကို ကြည့်ပါ
လူသားတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် ပညာရေးအဖြစ် ယူဆောင်ကြပါစို့။
စာနာနားလည်မှုကို စာသင်ခန်းနှင့် အိမ်တွင်းသင်ကြားမှုတွင် ထည့်သွင်းကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှဝေထားသော လူသားများကို ကြည့်ကြပါစို့။
မတူကွဲပြားသောလူများ၊ ယဉ်ကျေးမှုများ၊ ခံစားချက်များ၊ စိတ်နေသဘောထားများ၊
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ shared လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နားလည်ခြင်း။
တရားမစီရင်မီ စူးစမ်းချင်စိတ်ကို လေ့ကျင့်ရန် ပံ့ပိုးမှုမရှိဘဲ။
ဘ ၀ အတွက်သင်ယူခြင်းကိုချစ်မြတ်နိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့မှများလွန်းလှသည်။
"သိ။ " အပေါ်အလွန်အကျွံစိတ်ဖိစီးမှု။
အလွန်အကျွံ "စိတ်ခံစားမှုကိုမပြကြဘူး" ။
အလွန်အကျွံ "အားကြီးသောဖြစ်" ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားအတွက် ပညာရေးလိုအပ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုအတွက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာနာမှုနှင့်သိချင်စိတ်ကြွက်သားများကိုမတည်ဆောက်ပဲ၊ ငါတို့အချင်းချင်းစွမ်းရည်ကိုတစ်မူထူးခြား။ လှပသောလူသားများအဖြစ်မြင်နိုင်သည်။
တရားစီရင်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှု။ လူမဆန်စွာ။ ပိပက္ခ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုများကိုအတွေးသစ်များ၊ အတွေးအခေါ်သစ်များဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုခံစားရနိုင်သည်၊ သို့သော်ကြာရှည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာများနှင့်ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးရန်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်နိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘက်လိုက်မှု၊ တရားစီရင်ခြင်း၊ စိတ်စွန်းကွက်မှု၊ မသိမှုသို့မဟုတ်အမုန်းတရားများကိုဆက်လက်စွဲကိုင်ထားမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်မည်မျှကြာမြင့်မည်နည်း။ စိတ်?
ထို့ကြောင့် အသက်2နှစ်နှင့်အထက် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာ့ပုံပြင်များ လိုအပ်ပါသည်။
ရာသက်ပန်သင်ယူခြင်းကိုချစ်ရန် self, အခြားသူများနှင့်ငါတို့ကမ္ဘာ။
ချစ်ရန်သင်ယူရန် self၊ အခြားသူများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာ။
သို့ ငါတို့နားလည်selves နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြား ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှုပ်ထွေးပြီး လှပသော မျှဝေထားသော လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးမှတဆင့်။
ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းရန်သင်ယူရန်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အတူselves နှင့်အခြားသူများ။
တရားစီရင်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ရန် လူ့ရန်။ ရန် ထုခတြောငျးပနျ။ အတူတူအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်။
စစ်မှန်သော လူ့ဇာတ်လမ်းများနှင့် ဘဝမေးခွန်းကြီးများဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်တီးကြပါစို့။
ငါတို့အတွင်းနှင့်အကြားရှိထုံးများကို untangle ကြကုန်အံ့။
ကြပါစို့ ရက်တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ထည်။
ပါဝင္ရန္ Better World Edယနေ့ပညာရေး။
လူငယ်များအတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ကမ္ဘာ့မေးခွန်း
ကျနော်တို့လိုလျှင် အားလုံး ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယိုများနှင့် ပုံပြင်များဖြင့် သင်ယူပါ။ ငါတို့ ၂ နှစ်အရွယ်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ့စိန်ခေါ်မှုများမဆိုလိုလိမ့်မည် တောင်မှတည်ရှိ?
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူငယ်များအတွက် စကားလုံးမဲ့ ဗီဒီယိုများနှင့် လူသားပုံပြင်များကို ဖန်တီးပါသည်။
Better World Ed 501(c)(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော ("Reweave, Inc.")။
စာရင်းသွင်းရန်, ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့် လှူဒါန်းရန် လူသားဆန်မှုကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဘာကြောင့် တည်ရှိနေသလဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်ရောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသည် (PD နှင့် အခြားအရာများ)
© Copyright 2022 Better World Ed (Reweave, Inc.) | လူသားဆန်စွာ သင်ယူကြပါစို့
အသိုင်းအဝိုင်း reweave ရဲ့ | ငါတို့ဖြစ်ကြစို့
သတ်မှတ်ချက်များ | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Xသင်၏အကြိုက်များနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါလည်ပတ်မှုများအားသတိရခြင်းဖြင့်သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ “ Accept” ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည် cookies အားလုံးကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။ မကျင့် sell ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ. ဆက်ဖတ်ရန်Acceptဘေးဖယ်နေသည်သတ်မှတ်ချက်များ
__stripe_mid 1 တစ်နှစ် Stripe သည် ငွေပေးချေမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် ဤ cookie cookie ကို သတ်မှတ်သည်။
__stripe_sid 30 မိနစ် Stripe သည် ငွေပေးချေမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန် ဤ cookie cookie ကို သတ်မှတ်သည်။
JSESSIONID session တစ်ခု New Relic သည် အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက် session counts များကို စောင့်ကြည့်နိုင်စေရန် Session identifier တစ်ခုကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် JSESSIONID cookie ကို New Relic မှ အသုံးပြုပါသည်။
laravel_session 30 မိနစ် laravel သည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအတွက် session instance တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ရန် laravel_session ကိုအသုံးပြုသည်၊ ၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ts3အနှစ် PayPal သည် PayPal မှတဆင့် လုံခြုံသော ငွေပေးငွေယူများကို ဖွင့်ရန် ဤ cookie ကို သတ်မှတ်သည်။
ts_c3အနှစ် PayPal သည် PayPal မှတဆင့် လုံခြုံသော ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ရန် ဤကွက်ကီးကို သတ်မှတ်သည်။
_ရာဝတီ 1 တစ်နှစ် ကွတ်ကီးကို GDPR Cookie Consent plugin မှအသုံးပြုသူက cookies များအသုံးပြုမှုကိုသဘောတူသည်ဖြစ်စေမသိုလှောင်သည်ဖြစ်စေသတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာကိုမျှမသိမ်းဆည်းပါ။
XSRF- တိုကင် 30 မိနစ် ဤ cookie ကို Wix မှသတ်မှတ်ထားပြီး လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုပါသည်။
givebutter_session2နာရီ ဖော်ပြချက်အဘယ်သူမျှမ
wp_woocommerce_session_eadf5e9ac70b75cf60bdd37a0be905522ရက်ပတ်လုံး ဖော်ပြချက်အဘယ်သူမျှမ
NID6လအတွင်း Google မှ သတ်မှတ်ထားသော NID cookie ကို ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် ကြော်ငြာတစ်ခုကို မြင်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ရန်၊ မလိုလားအပ်သော ကြော်ငြာများကို အသံပိတ်ရန်နှင့် ကြော်ငြာများ၏ ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာရန်။
_gat_gtag_UA_50467616_2 1 မိနစ် အသုံးပြုသူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် Google မှ သတ်မှတ်ထားသည်။
vuid2အနှစ် Vimeo သည် ဝဘ်ဆိုက်တွင် ဗီဒီယိုများကို မြှုပ်နှံရန်အတွက် သီးခြား ID တစ်ခုကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ခြေရာခံအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန် ဤ cookie ကို ထည့်သွင်းပါသည်။
__cf_bm 30 မိနစ် Cloudflare မှသတ်မှတ်ထားသော ဤ cookie ကို Cloudflare Bot Management ကိုပံ့ပိုးရန်အတွက်အသုံးပြုပါသည်။
__utmc session တစ်ခု ကွတ်ကီးကို Google Analytics မှသတ်မှတ်ထားပြီး အသုံးပြုသူဘရောက်ဆာကိုပိတ်သည့်အခါ ဖျက်လိုက်ပါသည်။ ၎င်းကို Google Analytics ၏ ဗားရှင်းအဟောင်းဖြစ်သည့် urchin.js နှင့် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အသုံးပြုပြီး စက်ရှင်များ/လည်ပတ်မှုများကို ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် __utmb cookie နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပါသည်။
__utmt 10 မိနစ် Google Analytics သည် တောင်းဆိုမှုနှုန်းကို ဟန့်တားရန် ဤ cookie ကို သတ်မှတ်သည်။
__utmv2အနှစ် ဧည့်သည်ကို အမျိုးအစားခွဲရန် Google Analytics ကိုဖွင့်ရန် __utmv ကွက်ကီးကို အသုံးပြုသူ၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။
__utmz6လအတွင်း လည်ပတ်သူသည် ဝဘ်ဆိုက်သို့ရောက်ရှိသွားသော အသွားအလာရင်းမြစ် သို့မဟုတ် လှုံ့ဆော်မှုကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက် Google Analytics သည် ဤကွက်ကီးကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
_gat2နာရီ တောင်းဆိုမှုနှုန်းကိုကန့်သတ်ရန် Google Cookie ကို Google Universal Analytics ကတပ်ဆင်ထားသည်။